Jubbaland : Amniga doorashada waxaa illaalinaya AMISOM iyo ciidanka Jubbaland - BBC News Somali
6 Agoosto 2019
Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland
Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo shir jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in waxyaabihii ay ku heshiiyeen waftigii midoowga Afrika ee shalay Kismaayo tagay ay ka mid ahaayeen arrimo la xiriira amniga doorashada.
"Amniga doorashada waxaa illaalin doona ciidanka booliiska AMISOM iyo Booliiska Jubbaland" ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan.
Waxa uu dhanka kale sheegay in la'isku raacay in ciidamada AMISOM ay ka hawlgalaan saldhigyada ka baxsan magaalada ee difaaca ay kaga jiraan ciidamada Soomaalida, dibna loo bilaabo hawlgaladii ka dhanka ahaa Alshabaab.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in dib loo bilaabayo kulamadii amniga ee joogtada ahaa ee u dhaxeeyay ciidanka Jubbaland iyo AMISOM.
Dhanka kale guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland Xamse Cabdi ayaa BBC-da u sheegay in ay loosoo gudbiyay magacyada inta badan dadka loosoo xushay in ay noqdaan xildhibaanada Jubbaland ee soo dooran doona madaxweynaha.
Arrimaha ayaa kusoo hagaagaya xilli uu magaalada Kismaayo maalinkii sedexaad ku suganyahay wafti ka socda urur goboleedka IGAD oo la sheegay in uu qiimeynayo hawlaha doorashada halka ay marayaan.
Musharixiin badan oo ka mid ahaa kuwii ugu cadcaddaa ololaha ayaa diidey in ay is diiwaangaliyaan kadib markii ay guddiga doorashada ku eedeeyeen in uu ka gudbay waajibaadkii loo xil saaray.
Waxa ay sheegeen in mas'uuliyadda diiwaangalinta musharixiinta madaxweynenimo iyo waliba shuruudaha ay tahay in ay soo buuxiyaan ay tahay in uu soo dajiyo guddi laga soo dhex xulay baarlamaanka iman doona, sida inta badanba ka dhacda doorashooyinka Soomaaliya.
Dhanka kale Injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed, oo ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa wareysi uu siiyay BBC-da ku sheegay inuu faraha kasii baxay xiriirkii u dhaxeeyay maamulkooda iyo dowladda Federaalka Soomaaliya.